Hooyo Doonaysa In Loo Naxariisto Nin Shan Carruur Ah Ka Dilay – somalilandtoday.com
(SLT-Washington)-Hooyo Maraykan ah oo shan carruur ah uu ka dilay aabahood ayaa xeerbeegti dacwaddiisa qaadaysa ka codsatay in ayna dil ku xukumin. Amber Kyzer ayaa maxkamada ku taalla South Carolina u sheegtay in Tim Jones Jr “uusan wax naxariis ah tusin carruurta, balse carruurtiisu ay jeclaayeen”.
Guurtidan ayaa ka baaraan dagaya in Jones dil lagu xukumo ama xabsi daa’in la dhigo. “Waan maqlay waxay carruurtu mareen iyo xanuunka taabtay,” ayay tiri Kyzer oo maxkamadda ku sugnayd Salaasadii. “Hooyo ahaanna, haddaan awooddo wajigiisaan badali lahaa. “Taasi waa hooyonimada igu jirta.
Jones ayaa maydadkii carruur ku duuduubay baco sida dacwaddiisii lagu sheegay, sagaal maalmood ayay gaadhigiisa saarnaayeen ka dibna maydadkii ayuu ku aasay baadiyaha Alabama.
Mississippi ayaa lagu xiray ka dib markii uu askari uriyay urkii maydadka oo gaadhiga dhankiisa ka soo baxayay.